Nezvedu - Shinva Medical Instrument Co., Ltd.
Shinva Medical Chishandiso Co., Ltd.
Shinva Medical Instrument Co., Ltd. yakavambwa muna 1943 uye yakanyorwa paShanghai Stock Exchange (600587) munaGunyana 2002.
Iri rinotungamira indasitiri yehutano indasitiri boka rinobatanidza kutsvagisa kwesainzi, kugadzirwa, kutengesa, mabasa ekurapa uye kutengeserana mashandiro ezvigadzirwa zvemishonga nemishonga.
Muchikamu chemidziyo yezvokurapa, mapfumbamwe zvigadzirwa zvigadzirwa zvine hunyanzvi hwekumisikidza uye tekinoroji yakakwana yakaumbwa, inovhara hutachiona hutachiona, radiotherapy uye imaging, zvishandiso zvekuvhiya uye orthopedics, kamuri yekushandisa mainjiniya nemidziyo, zvishandiso zvemazino uye zvinoshandiswa, mu-vitro yekuongorora reagents uye zviridzwa, zvipenyu zvinhu uye zvinoshandiswa, dialysis zvishandiso uye zvinoshandiswa, kurapwa kwezvakatipoteredza kuchengetedza uye mimwe minda Parizvino, zvakasiyana uye kubuda kwehutachiona hwekutonga michina chinzvimbo pakati pepamusoro pasirese. Iyo R & D uye kugadzirwa kwemichina ye radiotherapy yakakura muchikero, yakakwana mumhando dzakasiyana, yakakwira mumugove wepamusika wemusika uye inotungamira mune yehunyanzvi nhanho.
Muchikamu chemidziyo yemishonga, inoumbwa neina makuru einjiniya tekinoroji nzvimbo: bio-pharmaceuticals, yakakosha infusion, echinyakare Chinese mishonga yekugadzirira uye gadziriro yakasimba. Inobatanidza kutsvagisa nekusimudzira, kugadzira uye kutengesa zvigadzirwa zvemishonga. Pamusoro pekugadzirwa kwezvinhu zvakajairika zvemishonga, inopa hutatu hwe "mishonga yezvigadzirwa zvemishonga, michina yemishonga uye yeinjiniya yemishonga" ine masevhisi emhando yepamusoro. Panguva imwecheteyo, inopa iyo yese pasuru sevhisi yekuvakwa kwemakemikari mishonga, yemakemikari mishonga uye yemiti mishonga mafekitori, uye inogadzirisa zvese kunetseka kwevatengi.
Mumunda wezvekurapa, Shinva akaenderera mberi achivandudza yavo yemakwikwi uye mukurumbira Tichivimba nehunyanzvi hwekudyara, kuvaka, kushanda, kutenga uye mapuratifomu ebasa, isu tichavaka boka rechipatara remazuvano nemafambisirwo epamberi ekurapa, akacheka-pamucheto zinga retsvagurudzo yesainzi, cheni manejimendi manejimendi uye kusangana kwe organic kwezviwanikwa.
Muchikamu chekurapa nekutengeserana, Shinva anopindura zvine mutsindo musika nyowani uye mushanduko, inochengetedza makwikwi emakambani akasimba uye hutano hwakasimba hwekusimudzira, uye inoita bhizimusi modhi yekutsvaga nekuvandudza.